- कल्पना आचार्य
यति बेला हामी सबै होम क्वारेन्टाइनमा छौँ । वर्षौंदेखिका हाम्रा हतारोहरू, हाम्रा कामहरू, सबैसबै ठप्पप्रायः भएका छन् केही समयलाई । तीव्र गतिमा दगुरिरहेको दुनियाँको गतिमा एक्कासि ‘ब्रेक’ लागेको छ । यति बेला चकनाचुर भएको छ मान्छेको मनभित्र रहेको भौतिक संसारप्रतिको घमण्ड ।
यति बेला मान्छेलाई बाँच्न बिहान–बेलुका खाना र एउटा ओत लाग्ने छानो भए पुग्दो रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । अनि यो हारालुछ, यो दौडादौड, यो अहम्, यो घमण्ड आखिर केका लागि गरिरहेछ मान्छे ? मान्छेले आर्जन गरेका यी भौतिक सुख सुविधा, यी सबले के दिँदोरहेछ र ? आखिर त्यही एक थान भागदौड र तनावको जिन्दगी ।
बाबाले छोरा देख्दैन, श्रीमतीले श्रीमान् भेट्दिनन्, आमाले छोरा देख्न पाउँदिनन् । सब–सब दौडिरहेछन् १/१ मिनेटको गन्ती राखेर । मान्छेद्वारा रचिएको यो साम्राज्य दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले लाख बिन्ती गरेको भए पनि शायद आफूलाई १ मिनेट रोक्न तयार थिएन ।
संसार जित्ने दौडले मान्छेलाई मेसिन ज्यादा बनाएको थियो । तर, यति बेला एउटा भाइरसले संसारलाई घरभित्र थुनिदिएको छ । समयको यो प्रहरमा उभिएर सोच्ने बेला आएको छ । हामीले जम्मा गरेको भौतिक सुख सुविधा, अहम् घमण्डको आयु कति हो ?
लाग्छ, यति बेला पृथ्वीले मज्जाले थकाइ मारेको छ । मान्छेहरूको मात्रै होइन, पृथ्वीकै आयु छोट्याउन घोडाझैँ कुदिरहेका लाखौँ कलकारखाना एकैचोटि बन्द भएका छन् । शायद पृथ्वीमा पहिलोचोटि होला, सवारी साधनको चर्को साइरन, मान्छेको भीडभाड, कोलाहल, धुलोधुवाँ सब–सब बन्द भएको छ । चराहरू मज्जाले खुला हावामा श्वास लिइरहेछन् ।
जंगली जनावरहरू शिकारीको डरविनै जंगलमा स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेछन् । यस्तो लाग्छ, मान्छेलाई उसकै घरभित्र कैद गराएर सम्पूर्ण पशुपक्षी एउटा रोमाञ्चक यात्रामा निस्केका छन् । खोलानाला, नदी, पहाड, हिमाल आफ्नै गतिमा बगेका छन् शान्त भएर । निश्चल छ आकाश प्रकृति अझ बढी सफा र सुन्दर भएको छ । मानौँ, लामो समयको प्रतीक्षापछि बिस्तारै स्वस्थ हुँदै गएको छ पृथ्वी ।
विगतमा धेरै नै धमिलियो भूमण्डल, धेरै ढले सतिसालहरू । धेरै नै दोहन भए प्रकृतिका छटाहरू । बैगुनी मान्छेका क्रुर पन्जाबाट, यो अतिक्रमणबाट दिन प्रतिदिन अस्वस्थ र विक्षिप्त हुँदै गयो पृथ्वी । यता विज्ञान मानिसका लागि वरदान हो भन्दै भत्काउँदै गयो मान्छेले प्रकृतिका सुन्दर सिर्जनाहरू ।
मानिस र प्रकृति एकअर्काका पर्याय हुन् भन्ने बिर्सेर एक्लो उन्मुक्त साँढेजस्तो बनेको मान्छेले कब्जा गर्दै गयो पृथ्वीका छटाहरूमाथि । वनजगंल, बोटबिरुवा पशुपक्षी, खोलानाला अथवा प्रकृतिका सम्पूर्ण अवयवहरूमाथि एकछत्र राज गर्ने दुस्वप्न पालिरह्यो मान्छेले ।
छिटो फलाउने र व्यापार गर्ने निहुँमा प्रकृतिको नियमविपरीत माटोमा अनेक केमिकलयुक्त मलहरू हाल्न थालियो । फलस्वरूप बिरामी भयो माटो । बिरामी माटोले उब्जाएको अन्न कसरी स्वस्थ हुन्थ्यो र ? दिन दुई गुना रात चौगुना धनी बन्ने उद्देश्यले अनेकन विषादी छरेर तरकारी र फलफूल रोप्न थालियो । विष छरेर हुर्केको बिरुवामा कसरी अमृत फल्थ्यो र ?
त्यति मात्रै होइन, जिब्रोको स्वादका लागि क्वाप्पै खान मिल्ने प्लाष्टिक प्याकिङका रेडिमेड खानासँगै रोगका पोकाहरू पनि पेटभित्र हुल्यौँ । फलस्वरूप एकपछि अर्को रोगको महाचगुंलमा फुत्कनै नसक्ने गरी घेरिँदै गएको छ मान्छे ।
हामीले धेरै अत्याचार गर्‍यौँ पशुपंक्षीमाथि पनि । आफ्नो क्षणिक मोजमज्जाका लागि भत्कायौँ धेरै चरीका गुँडहरू, पशुका बासहरू र अन्ततः आफैँलाई कैदीबन्दी बनायौँ घरभित्र । आज हामी १/२ हप्ता आफ्नै परिवारसँग आफ्नै घरभित्र बस्दा उकुसमुकुस भयो भनेर कोकोहोलो गरिरहेछौँ । तर, वर्षौंदेखि हामीले आफ्नो खुसीका लागि कति पशुपक्षी र चराचर जगतलाई बन्दी बनायौँ, त्यसको लेखाजोखा छैन ।
धार्मिक व्यवहार मात्रै होइन, हाम्रै शरीरको विज्ञान अध्ययन गर्‍यौँ भने पनि थाहा हुन्छ, मानिस शाकाहारी थियो कि मासंहारी भन्ने । हामीले जिब्रोको स्वादका लागि कति प्राणीको रगतको खोला बगायौँ ? त्यसको कुनै हिसाब छैन ।
हामीले पशुपक्षी मात्रै खाएनौँ, त्यससँगै खायौँ अनेक रोगका बीजहरू पनि । सँगसँगै निलिरह्यौँ प्रतिशोध, हिंसा र आक्रोशका मुस्लो पनि । जसरी कुनै रगत पिउने, मासु खाने प्राणी हिंस्रक र शिकारी हुन्छ, त्यसै गरी घोलिरह्यौँ हामीले आफ्नो रगतमा हिंसा, आक्रोश र घृणाका ज्वालाहरू । अनि झन्भन्दा झन् फस्दै गयौँ कुसंस्कार र अपराधको दुनियाँमा ।
सुन्नै मात्र पनि नसक्ने अपराधका ठूलाठूला महाजञ्जालहरूका कारण केलाउँदै गयौँ भने हाम्रो खानपान पनि उत्तिकै जिम्मेवार भेटिन्छ । शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपमा पनि पृथ्वी वर्षौंदेखि रोगी बन्दै आएको थियो । यति बेला लकडाउनभित्र बसेर हामीले हिसाब गर्ने हो भने थाहा लाग्छ, पृथ्वी कति बिरामी थियो भनेर । यसमा मान्छेको व्यवहार, आचरण र स्वाद कसरी जोडिएको छ भनेर ।
प्रकृतिले निःशुल्क दिएको छ सबैलाई हावा, पानी, वन, जंगल र जमिन अनि प्रकृतिका अन्य अवयवहरू । तर, मान्छेले नै खडा गरेको छ वर्गका साम्राज्यहरू । धनी देश, गरिब देश । विकसित देश, अविकसित देश । ठूलो मान्छे, सानो मान्छे । यो पदको मान्छे, त्यो पदको मान्छे । यो जात त्यो जात । यो धर्म त्यो धर्म । यो रङ, त्यो रङ । यसरी खडा गरेका विभेदका काँडे तारहरू केवल मान्छेका लागि हुन् । जब प्रकृतिको सुनामी आउँछ, त्यहाँ केवल मान्छे मात्र बन्नुपर्दछ ।
प्रकृतिको अगाडि देशको सीमा, जात, धर्म, वर्ण र पद केही छैन । प्रकृतिले केवल मान्छे र यसमा आश्रित जीवजनावर र चराचर जगत् मात्र चिन्दछ ।
योभाइरसको बाढी यति बेला सम्पूर्ण मानवजातिमा समान रूपले बगिरहेको छ । संसारभरि मै हुँ भनेर साम्राज्य जमाइरहेका देशहरू पनि आच्छु–आच्छु परेका छन् । तासको घरझैँ गर्ल्याम्म ढलेको छ मान्छेको विरासतको दुनियाँ ।
मान्छेले भिराउँदै हिँडेका अनेकअनेक वर्गका साम्राज्य पुनः एक पटक ध्वस्त भएको छ । क्षणभरमै वर्षौंदेखि बिजुलीको रफ्तारमा दौडिरहेका मै हुँ भन्ने देशको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस भएको छ । त्यसैले मान्छेले तयार गरेको वर्गका जालोहरू केवल मान्छेको आँखामा पोतिएको भ्रमको जालोभन्दा अरु केही होइन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
समयले यति बेला हाम्रो परीक्षा लिइरहेको छ । हामी अत्यन्तै भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । अनि यो महाविपदको कारण हामी स्वयम् नै हौँ । हाम्रो आनीबानी, आहारव्यवहार हो भन्ने कुरा जान्नमा ढिला गर्नु हुँदैन । धैर्य र संयमता राख्यौँ भने यो विपदबाट अवश्य मुक्ति पाउनेछौँ । तर, यो मत्थर भएपछि यसले निम्त्याउने मानवीय क्षति त छँदै छ, आर्थिक र सामाजिक अवस्था पनि उत्तिकै भयावह हुने निश्चित छ ।
प्रकृतिको यो महाविपत्ति सम्पूर्ण मानवजातिकै लागि एउटा मौका पनि हुन सक्छ । अब सचेत भई प्रकृतिसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हाम्रो भविष्य सुरक्षित रहला, होइन भने सधैँ समयले हामीलाई मौका नदिन पनि सक्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २७, २०७६, १२:३३:००